नारायणी काण्ड: ज्वाइँकै कारण छोरीले यस्तो कदम उठाईन भन्दै माईति आयो पहिलो पटक मिडियामा। – Onlines Time
नारायणी काण्ड: ज्वाइँकै कारण छोरीले यस्तो कदम उठाईन भन्दै माईति आयो पहिलो पटक मिडियामा।
January 26, 2021 January 26, 2021 onlinestimeLeaveaComment on नारायणी काण्ड: ज्वाइँकै कारण छोरीले यस्तो कदम उठाईन भन्दै माईति आयो पहिलो पटक मिडियामा।
बिहान उठ्नेबित्तिकै फेसबुक/इन्स्टाग्राम खोल्दा कसै न कसैको बर्थडे, म्यारिज एनिभर्सरीका पार्टीका फोटाले तपाईंको अटेन्सन कुरिरहेका हुन्छन् । महामारीका बेला तपाईं भने घरमै बस्ने, कहीँ–कतै नजाने, भोजभतेर नगर्ने तर अरूले कोरोना भन्ने कुन चराको नाम हो भनेझैं पार्टी गरेको देख्दा तपाईं भित्रभित्रै मुरमुरिनुहुन्छ होला ।
अचेतन/अवचेतन मनमा डाह र आक्रोश भरिन्छ होला । तर एक छिन विचार गर्नुस् त, तपाईंले गर्ने विकेन्ड गेट टुगेदरका फोटा हेरेर तपाईंका कैयौं साथीहरू ठ्याक्कै त्यस्तै पो सोचिरहेका छन् कि ?
इन्टरनेटमा तपाईंले देख्ने सयौं मानिस आर्थिक हिसाबले तपाईंभन्दा सम्पन्न होलान् । तिनीहरूको लवाइखवाइ र रहनसहन छुट्टै होला । छुट्टी मनाउन उनीहरू देश–विदेश घुम्न जालान् । एयरपोर्ट, महँगा रेस्टुरेन्ट र आकर्षक ‘बिच’ मा बसेका फोटा पोस्ट गर्लान् । तपाईंलाई लाग्छ, असली जीवन त उनीहरूले बाँचिरहेका छन् । यस्तो देखेर फेसबुक/इन्स्टाग्राममै फोटो हाल्न मात्र भए पनि तपाईंलाई घुम्न जान मन लाग्छ ।
त्यसविपरीत सोसल मिडियामा देखिने हजारौं मानिसभन्दा तपाईंको आर्थिक स्थिति बलियो हुन सक्छ । जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गरेर पनि आफूलाई मन लागेका लक्जरीका लागि तपाईंसँग पैसा हुन सक्छ । तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ, धन कमाउन र बचाउन जति मिहिनेत लाग्छ, त्यसको आवश्यकता र मूल्य बुझ्न उत्तिकै बल लगाउनुपर्छ ।
तपाईंका प्रायः फेसबुक फिड कसै न कसैको अवार्ड, पुरस्कार र उपलब्धिका ‘प्रुफ’ ले भरिएका हुन्छन् । लामा क्याप्सनसाथ ती फोटा देखेर तपाईंलाई लाग्न सक्छ, ‘म कति पछाडि छु ।’ आफूदेखि वितृष्णा पैदा हुन पनि सक्ला । रिसले कतिलाई अनफलो पनि गर्नुभयो होला । याद गर्नुस् त, तपाईंकै त्यस्ता फोटा र क्याप्सन देखेर कतिलाई ठ्याक्कै त्यस्तै डाह लागेन होला र ?
सोसल मिडियामा कतिपय व्यक्ति फोटो र भिडियो कम अनि ज्ञानगुनका कुरा बढी साझा गर्छन् । ती व्यक्ति तपाईंभन्दा बुद्धिमान र जानकार होलान् । सायद उनीहरू आफ्नो दैनिकीको उल्लेखनीय हिस्सा पढ्नमा पो व्यतीत गर्छन् कि ? उनीहरूका पोस्ट पढेर तपाईंमा हल्का निराशा पैदा हुन सक्छ । तर के सम्झनुस् भने, थुप्रै व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन् जो आफूसँग भएभन्दा अलि बढी नै ज्ञान देखाउनमा विश्वास गर्छन् ।
अचेल टिकटकले सबैलाई मोहित पारेको छ । आफ्ना काम बित्दाबित्दै पनि हामीलाई दिनहुँ दुई–तीनवटा टिकटक नबनाई चित्तै बुझ्दैन । अरूको टिकटक र त्यसको वाहवाही देखेर तपाईंले पनि अप्ठेरो लागीलागी भिडियो बनाउन सुरु गर्नुभयो होला । तर के त्यो आवश्यकता थियो कि मात्र देखासिकी ?
यद्यपि सोसल मिडियामा हुने तुलना अर्थात् ‘सोसल कम्पेरिजन’ सधैं नकारात्मक मात्र हुँदैन । सन् २०१५ को एक अध्ययनअनुसार, उमेर बढ्दै जाँदा व्यक्तिको सामाजिक तुलना प्रक्रियामा संलग्न हुने झुकाव घट्दै जान्छ । तपाईं/हामीमध्ये धेरै जनाले इन्टरनेटमै भेटिएका मानिसको जीवनशैली र उपलब्धिबाट प्रेरित भएर आफूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका छौं । करिअरमा प्रगति गरेका छौं । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कोही व्यक्ति सोसल मिडियामा खुसी देखिनुले ऊ वास्तविक जीवनमा पनि खुसी नै छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
सोसल मिडियामा देखा पर्ने हँसिलो मुहार, आकर्षक शरीर, आर्थिक, व्यावसायिक र सामाजिक सफलता मात्र वास्तविक खुसी र सन्तुष्टिको मापक होइनन् । त्यसैले हामीले सोसल मिडियामा अर्काले पोस्ट गरेका कृत्रिम खुसीका शब्दहरू वा फोटाहरूलाई हेरेर आफैंलाई मनरोगी बनाउनुभन्दा आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न कोसिस गर्‍यौं भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा खुसी र सुखी हुनेछौं ।
कतार प्रहरीमा ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरुको धमाधम भर्ती हुँदै
भाइरल अर्जुन बि.क काठमाडौं बाट प्र’क्रा’उ : जबर’जस्ति बन्ध’क गरेको आरो’प Arjun Bk
कालापानीक्षेत्र फिर्तागर्ने घोषणा?| इन्डियन सेनापति “Bipin Rawat” काठमाण्डुमा | नेपालि भूभाग फिर्ताको घोषणा होला त ? (भिडियो हेर्नुहोस)
May 5, 2021 May 5, 2021 onlinestime
जिवनको बिहेमा रमेश प्रसाईं भातख्वाउरे भएर जादा के के भयो हेर्नुस्,,बुवाआमा खोइ Zeewan Bista,Ramesh
December 6, 2020 onlinestime
एक्का’शि प्रचण्ड गय भारत,केपि ओलि आत्तिदै प्रचण्ड लाई दिए क’डा चेता’वनी,आखिर किन गय प्रचण्ड भारत हेर्नु